Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zaseAlgeria zokuhamba » IAlgeria ivule kwakhona uhambo lokuhamba ngenqwelomoya kumazwe eFrance, eTurkey, eSpain naseTunisia
Abagibeli abangenayo kufuneka babekwe bodwa kwihotele echongiweyo kwiintsuku ezintlanu emva kokufika, njengenxalenye yenkqubo yezempilo ngokuchasene ne-COVID-19.
IAlgeria ivula uhambo lokuhamba ngenqwelomoya eFrance
IAlgeria iqala kwakhona ukugcwala komoya eTurkey
IAlgeria iphinda ivule ikhonkco lomoya neSpain
Amagosa karhulumente wase-Algeria abhengeze ukuba emva kokuvalwa kweenyanga ezili-14, ilizwe livule kwakhona uhambo lwalo lomoya, okokuqala ngqa ukusukela oko kwaqhambuka ubhubhane we-COVID-19 ngo-Matshi 2020.
Inqwelomoya yokuqala esuka eFrance, kunye nabakhweli abangama-299 ababekhwele kuyo, yafika kwi Isikhululo senqwelomoya saseAlgiers ngolwesiBini emva kwemini.
Isicwangciso sokuvula siquka iinqwelomoya ezintlanu ukuya nokubuya kumazwe amane, kubandakanya iFrance, iTurkey, iSpain neTunisia, ngokorhulumente wase-Algeria.
Ngeli xesha, iAlgeria ixele i-305 entsha ye-COVID-19 kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo, iphakamisa inani elipheleleyo lamatyala aqinisekisiweyo ukuya kwi-129,318. Kwabhalwa abantu abasibhozo abafayo, nto leyo eyabangela ukuba inani labantu ababulewe yile ntsholongwane liye kuma-3,480 XNUMX.
I-Saint Lucia inciphisa iiprotokholi ezisesiqithini zabahambi abagonywe ngokupheleleyo yi-COVID-19
50 imiz edlule